February 20, 2017 No Comments News, Somali 696 views
Filimka Jagga Jasoos ayaa laga dhawaaqay jilistiisa waqti mudo laga joogo hada waxaana mooda in malinba maalinka ka danbeysa uu sii fooganayo waqtigiisu maadama oo madaxda filimku hadba sidaan oo kale dib usii dhigayaan waqtiga filimka ayagoo markaas keenaya qiil iyo sabab.
Arimo badan ayey sheegeen in ay sabab oo ahayd in uu filimku waqtigaan soo gaaro ayado mid walba oo arimahaas kamid ahina ay aha mid macquul ah lakiin sida tageero badan sheegeen filimka waqtigiisu aadka usii dib dhaco waxaa kuyimaada xiiso dhac dhanka taageeraha ah sida aan wada ognahayna filimkaan ayaa kusocda sheeko shactiro iyo romance ah waxaana mooda in ay taasi kadhigtay filimkaan mid laiska sugo loguna dulqaato xaalad walba oo soo wajahda markaas.
Wararkii ugu danbeeyey ee kasoo baxay arimaha filimkaan ayaa sheegaya in madaxda filimku ay dib ugu dhigeen arimo la xiriira dhanka jilitaanka ayado ay sheegeen in muqaalo yar yari ay kadhiman yihiin dhamaystiranka filimka hase ahaate shakhsi ka gaabsaday in uu sheego magaciisa balse xaqiijiyey in uu kamid ah kooxda hoose ee filimka ayaa wuxuu saxaafada usheegay in filimka ay kujiraan 29 heesood WOW! waa arin cajiib ah runtii!,wuxuuna intas raaciyey oo usheegay saxaafada inaan hal hees ah oo kamid ah 29kaas la samayn muuqaladooda wali!
Arintaan ayaa noqotay mid saxaafada iyo dhamaan tageeraha filimka ku abuurtay kuna abuuri doonta niyad jab balaaran oo dhanka filimka ah hadii uu sidaas ku socdana waxaa hubaal in Jagga Jasoos uu wajihi doono khasaare lixaad leh
Shahrukhan maku jiri doona filimka Bahubali 2? ka ogow halkan
DAAWO: Qaabka loo sameeyey goos-gooska filimka “Rangoon”
WOW! Maxad kataqaaan Caruurta ay dhaleen xidigaha bollywoodka kuwooda saaidka ugu eg waalidkood?-Ka baro halkan